Muwaadiniin Soomaaliyeed oo looga shakiyay caabuqa Corona oo l... | Universal Somali TV
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo looga shakiyay caabuqa Corona oo la seexiyay Isbitaal ku yaal dalka Kenya
Muwaadin Soomaaliyeed oo heesta dhalashada dalka Mareykanka wiil uu dhalay iyo wiil kale oo awoowe uu yahay ayaa lagu karantiilay Ismaamul goboleedka Turkana ee dhaca waqooyiga galbeed ee dalka Kenya.
Madaxa caafimaadka ee degmada galbeed ee Turkana Dr Dominic Ongaki ayaa xaqiijiyay arintaan isaga oo intaa ku daray in Muwaadinka soomaaliga iyo wiilashiisa markii la baaray laga dareemay jirkiisa kuleyl Baahsan.
Waxaa sidoo kale la karantiilay darawalkii ku waday gaariga Taxiga, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Kenya.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay wadada dheer ee xiriirisa Turkana iyo Lodwar iyaga oo ku wajahnaa xerada qaxootiga ee Kakamu oo hoy u ah kumanaan ruux oo soomaali ah iyo ajaaniib kale oo qaxooti ahaan u jooga dalka Kenya.
Odaygaan Soomaaliyeed ayaa dalka Mareykanka ka soo safray bartamihii bishan ka hor inta uusan ka soo cagadhigan magaalada Nairobi 16-bishan Maarso, si uu waqti ula qaato qoyskiisa oo qaxooti ku ah xerada Kakuma ee dalka Kenya.
Kan-xigaShaqaale ka tirsanaa hey,ada Bisha Ca...
Kan-horeBeeraleyda Jaadka Kenya oo walaac ka ...
55,186,704 unique visits